Muuri News Network » Daawo Sawirada: Doon Hub Culus usoo Waday SOMALIA oo la qabtay & Xog Cusub..
Daawo Sawirada: Doon Hub Culus usoo Waday SOMALIA oo la qabtay & Xog Cusub..
Warar hoose oo aan ka helnay ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan laamaha amniga DFS, ayaa sheegay in doonidaasi kaluumeysiga ah ee siday Hubka faraha badan ay aheyd mid u rarneyd ganacsade Soomaaliyeed oo xarun qarsoodi lagu iibiyo hubka ku leh Somalia.
Doonidaani oo ay gacanta ku dhigeen Ciidamada Badda Dowladda Australia, ayay xogtu sheegeysaa in xiriir ay la sameysay Dowlada Somalia, balse wadihii doontaasi uu sheegay magaca ganacsadaha ay doontaasi Hubka u siday oo aan wali loo soo bandhigin warbaahinta.
Xogtu waxa ay intaa kusii dareysaa in Doontaasi qorshaheeda uu ahaa inay kusoo xirato Dekada weyn ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku diyaarsanaayen xubno ka tirsan maamulka Dekeda oo ku howlanaa badbaadinta Hubkaasi oo ka koobnaa 1989 qoriga AK-47 ah, qoryaha fud fudud, ku dhawaad 100 gantaalada garbaha laga rido ah, 49 qoryaha daran dooriga u dhaca iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuro IWM.
Sidoo kale, ilo wareedka aan xogtaani kasoo xiganay ayaa sheegaya in Ganacsadahaasi uu yahay mid si aad ay u baadi goobeysay Dowlada Somalia, kaasi oo maleeshiyaadka Al-shabaab usoo dajiya Hubka si sahlana ugu wareejiyo.
Ganacsadahaani ayaa sidoo kale la sheegayaa in Hubkaasi ay ka dalbadeen maleeshiyaadka Al-shabaab, islamarkaana uu ujeedku ahaa in xiliga Doorashada lagu qalqal galiyo amaanka magaalada Muqdisho, waxa ayna xogtu intaa raacisay in Doonidaasi gacanta lagu dhigay ay goor sii horeysay ka baxsatay gacanta Ciidamada Dekada ka howlgala xili ay habeen aheyd, islamarkaana la rumeysnaa inay siday Hub qarsoodi ah.
Admiral David Johnston Taliyaha Ciidanka howlgalka Australia, oo warbixintaani la wadaagay warbaahinta kasoo baxda dalka Australia, ayaa sheegay in wadaha Doonida uu watay Liis ay ku qornaayen magacyo dhowr ah oo uu ugu horeeyo magaca Ganacsadaha Hubka loo waday iyo Shaqsiyaadka ka howlgala Dekada Muqdisho ee ku howlanaa badbaadinta Hubkaasi, si loo gaarsiiyo Maleeshiyaadka Al-shabaab.